ရှမွေလပယ်ရီ၏ဝေဖန်မှုသည်“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးပျော်ရွှင်မှုအကြားဆက်စပ်မှုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ဆိုင်သောလား။ အမျိုးသားစစ်တမ်းနှစ်ခုမှရရှိသောရလဒ်များ” (2019) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
ဝမ်းနည်းပါတယ် Dr. Perry၊ ဒါက porn ပဲ။ ၂၀၂၁ တွင် Perry ၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သီအိုရီအရ porn သည်မဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများ၏အဓိကအချက်ဖြစ်သည်။ ကြည့်ပါ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှောက်ယှက်ခြင်း၏အခန်းကဏ္,၊ အပေါ်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှိုင်းယှဉ်မှုများနှင့်ညစ်ညမ်းသောတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းကိုပိုမိုနှစ်သက်ခြင်း (၂၀၂၁)).
တုန်ခါမှုမွမ်းမံခြင်း - 2019: စာရေးဆရာ Samuel Perry သည်မဟာမိတ်များသို့တရားဝင်ဝင်ရောက်စဉ်သူ၏အစီအစဉ်အားဘက်လိုက်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် နီကိုးလ် Prause နှင့် ဒါဝိဒ်သည် Ley တိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေ၌တည်၏ YourBrainOnPorn.com။ Perry နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှအခြားလိုလားသူ "ပညာရှင်များ" တွင်ပါဝင်သည် တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်။ စာဖတ်သူကိုသိသင့်ပါတယ် RealYBOP twitter (၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ၏သိသာခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူ) လည်းအသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်ခြင်းတွင်ပါဝင်နေသည် ဂယ်ရီ Wilson က, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, ဂါယူဆပါသည် နှင့် NCOSE, Laila Mickelwait, GAIL ထမင်းစားခန်းနှင့် ညစ်ညမ်းမှု၏အန္တရာယ်များအကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုသူအခြားမည်သူမဆို။ ဒါ့အပြင် David Ley နှင့်အခြား“ RealYBOP” ကျွမ်းကျင်သူနှစ်ယောက်လည်းရှိသည် porn စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကြီးများကလျော်ကြေးငွေခံရ xHamster (၎င်း၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များမြှင့်တင်ရန်ဆိုလိုသည်မှာ StripChat) နှင့်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုနှင့်လိင်စွဲလမ်းမှုသည်ဒဏ္areာရီများဖြစ်သည်ဟုသုံးစွဲသူများကိုစည်းရုံးသိမ်းသွင်းရန်။ ချီးမွမ်းကြလော့ RealYBOP twitter ကိုဖွင့်သည်) ဖြစ်ပေါ်လာသည် အဆိုပါညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူအတော်လေးအဆင်ပြေနေနှင့် RealYBOP twitter ကိုသုံးသည် ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကိုမြှင့်တင်ရန်, PornHub ကိုခုခံကာကွယ်ပါ (ကလေးညစ်ညမ်းသောလိင်နှင့်လူကုန်ကူးမှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများပါ ၀ င်သည်) နှင့် အသနားခံစာကိုအားပေးတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပါ ကျင်းပရန် PornHub တာဝန်ခံ။ RealYBOP ၏“ ကျွမ်းကျင်သူများ” သည်၎င်းတို့၏ RealYBOP အသင်း ၀ င်မှုကိုသက်တူရွယ်တူပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများတွင်“ အကျိုးစီးပွားပmembershipိပက္ခ” အဖြစ်စာရင်းသွင်းရန်လိုအပ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။
ဝေဖန်မှု၏ပေါ်လွင်ချက်များ (ပယ်ရီ, 2020):
ဘာသာရေးသုတေသီ Samuel Perry ၏ အသစ်သောစက္ကူ သူ၏အစောပိုင်းကညစ်ညမ်းသောလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုသောအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါဟာလိုလားသူ porn ideologues ပုံ နီကိုးလ် Prause နှင့်ဒေးဗစ်လိုင်ကပယ်ရီအားဤပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုကိုအားပေးခဲ့သည်။ မှတ်ချက်။ တစ်နှစ်အကြာတွင်ပယ်ရီသည်ဝံပုလွေအသစ် (Prause, Ley နှင့်သူတို့၏အုပ်စုများ) နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ YBOP ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ခိုးယူဖို့ website တစ်ခုနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်လူ။ YBOP ရဲ့ဝေဖန်မှုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးစားနေပါသလား
ပယ်ရီရဲ့ရုတ်တရက်အသစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုသို့ပြန်သွားပါ ရှုပ်ထွေးသောစာရင်းအင်း“ မော်ဒယ်လ်” ပြီးနောက်ပယ်ရီသည်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကို porn အသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲဆက်ဆံရေးပြproblemsနာများအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဤသည် Prause နှင့် Ley အလွန်ပြောနေတာအချက်ဖြစ်ပါတယ် တွန်းအားပေးခဲ့ကြပုံ porn exonerating နေချိန်မှာအများပြည်သူရှုပ်ထွေးဖို့ကြိုးစားရန်။ အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Perry ရဲ့သစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် gaping ပေါက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းအပေါ်တိကျသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကြောင်းခြင်းမရှိဘဲ, သူ့ပြောဆိုချက်ကိုတစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။
Perry ရဲ့အခိုင်အမာအားဖြင့်တုနေကြတယ် (80 longitudinal လေ့လာမှုများအပါအဝင်) အနိမ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုပေးရန် porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်7လေ့လာမှုများကျော်။ အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ် အားလုံး ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့လာမှုတွေဆက်စပ်ပိုပြီး porn အသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။
အဆိုပါ Prause-Ley conundrum: အဘယ်သို့သောအကြောင်းလုပ်ဖို့ များပြားလှအနုတ်လက္ခဏာရလဒ်များမှ porn အသုံးပြုမှုကိုချိတ်ဆက်အပေါငျးတို့သများစွာသောလေ့လာမှုတွေ? လိုလားတဲ့ porn sexologists သာဤမျှလောက်များစွာသောသံသယရှိလေ့လာမှုများနှင့်အမြင်အပိုင်းပိုင်းထုတ်စုပ်နိုင်မပေးသောဤလိမ္မာသည် ဖြစ်. ရှေးရှေးသူတို့ရဲ့ agnotology ကမ်ပိန်းကိုထောကျပံ့ဖို့မဟာဗျူဟာသစ်တီထွင်: အစားတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေပေါ် porn ရဲ့အယှက်ရှိသမျှတို့ကိုအပြစ်တင်ကြပါတယ်။ (ပြောရမည်မှာ ဘာ?)
ထို့ကြောင့်အတွက် အဆိုပါ porn-သိပ္ပံ Deniers အနည်းငယ် 2016 (Ley & Prause) သည်ကမ္ဘာကြီးကိုယုံကြည်လက်ခံလာအောင်ကြိုးစားသည့်ပထမဆုံးပညာရှင်များဖြစ်လာသည် တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ, porn အသုံးပြုမှုကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဲ, အများအတွက်တာဝန်ယူခဲ့ 40 အောက်မှာလူ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှုန်းများအတွက်ကြီးမားတဲ့ခုန်။ ဤရဲရင့်စွာပြောဆိုသောအချက်၏“ တန်ဖိုး” သည်အများပြည်သူစိတ်ထဲတွင် porn ၏အန္တရာယ်များကိုသံသယဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းကိုထိခိုက်စေသည့်သက်သေအထောက်အထားများအားလုံးထံမှအံ့ distr ဖွယ်ရာအာရုံတစ်ခုဖြစ်သည်။ မည်သည့် agnotologist မှသင်ကအမှန်တရားကိုအားနည်းသွားစေမည့်နည်းလမ်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးလိုသည့်အပြုအမူကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လိုသူများ၏စိတ်ထဲတွင်သံသယဖြစ်စေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။ Big Tobacco သည် "agnotology ၏သိပ္ပံ" ကိုတီထွင်သူဟုသတ်မှတ်သည်။
ရှင်းရအောင်။ Deniers ကိုးကားထားသောလေ့လာမှုတစ်ခုမှလွဲချော်မှုတစ်ခုမှ လွဲ၍ ၎င်းတို့၏“ ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ပါ၊ င်း တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ"နီ herring ။ ချွင်းချက်ကတော့ဒီစာတမ်းကလူမှုဗေဒပညာရှင် SL Perry ပါ။
တနည်းကား, ရှိနေသော်လည်း 100 လေ့လာမှုများကျော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ porn အသုံးပြုမှုကိုဆက်သွယ်ထားသော နှင့် ဆင်းရဲတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှု။ ဒါဝိဒ်သည် Ley နှင့်နီကိုးလ် Prause ၎င်းတို့၏တက်ကျားကန်ဖို့မဟာဗျူဟာသစ်ဖွင့် conjured လိုလားတဲ့ porn ဝါဒဖြန့်စက်: တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအစစ်အမှန်တရားခံမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဖြစ်ပါတယ်။ မနိုင် ညစ်ညမ်းစေသတည်း။
ဤစကားပြောသောအချက်သည်ပင်ကိုယ်မူလအထောက်အပံ့မရှိသဖြင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်ပြdecadesနာမဟုတ်ကြောင်းဆယ်စုနှစ်များစွာလိင်ဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များကိုပင်တန်ပြန်ရန်ပင်ဝိုင်း ၀ န်းသည် porn အသုံးပြုမှုကိုအနှုတ်လက္ခဏာရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုအသစ်တိုင်း၏တုန့်ပြန်မှုဖြစ်လာသည်။ ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဆရာဝန်နဲ့သူတို့သဘောမတူပေမဲ့၊ Prause & Ley ကငါးမန်းကိုခုန်ချခဲ့တယ် 40 အောက်မှာအမျိုးသားများတွင်နာတာရှည် erectile အလုပ်မဖြစ်များအတွက်ပုံမှန်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပြစ်တင်!
ဥပမာအားဖြင့်, 2016 အတွက် Prause ပယ်ချဖို့ကြိုးစားနေ ဒီလေ့လာမှုရဲ့တွေ့ရှိချက် သူမ၏ပုံမှန်အတိုင်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကောက်ရိုးလူနှငျ့အတူ:
ဒီစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 487 ကောလိပ်ယောက်ျား (အသက်အရွယ်မရွေး 18-29 နှစ်) စစ်တမ်းကောက်ယူ။ ရလဒ်များပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, လိင်ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းလိင်အပြုအမူကိုတောင်းဆို, တမင်တကာ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံတွေကို conjure နှင့်ရှိသည်ဖို့ခဲ့တယ်, လူကိုချောင်းမြောင်းပိုမိုညစ်ညမ်းပြသ ပုံရိပ်။
ထွက်ပြုရမည်မဟုတ်, Ley လူပျိုတို့အတွက်နာတာရှည် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအပြစ်တင်:
ထပ်မံ၍ မည်သည့်ဆီးရောဂါပညာရှင်မျှ Ley ၏ပြောကြားချက်အရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လူငယ်များကို ED ဖြစ်စေသည်ဟုဆိုထားသည် (Ley သည်မည်သည့်အထောက်အပံ့အတွက်မျှဘာမျှမဖော်ပြကြောင်းသတိပြုပါ) ။ သို့သော် Ley ရဲ့အယူဝါဒ "porn ဘယ်တော့မှပြanyနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် ... ။"
Nicole Prause နှင့် David Ley တို့က Samuel Perry ၏ညစ်ညမ်းမှုလေ့လာမှုများကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည် (Perry သည်သူ၏မူလစာတမ်းအားပြန်လည်ဆန်းစစ်ရန်လုံလောက်သည်ဟုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟုခံစားရပါသလော) ။
Prause အများကြီးလူတွေ scares အဖြစ်, နောက်နေမဟုတ်ပါဘူး။ သူမသည်တစ်ဦးရှိပါတယ် ရှည်လျားသောသမိုင်းနှောင့်ယှက်, အသရေဖျက်မှုနှင့်ပွဲ၌သတင်းပို့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ သုတေသီများ၊ ဆေးဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ သူမအနေဖြင့်ယူကေ၊ ယူကေရှိပရဟိတလုပ်ငန်းများ၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာအများအပြားပါမောက္ခ IITAP, ခါးပန်းက The New ကိုမူးယစ်ဆေး, ထှကျမွောကျရာ Cry သည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ် Fight အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း (အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ) ။
ပယ်ရီမည်သို့တုံ့ပြန်ခဲ့သနည်း။ သူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ပုံရသည် "Iသူတို့ကိုမင်းနဲ့အကြောင်းပြလို့မရဘူး, သူတို့နဲ့အတူပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။ ”
2019 ,ပြီလမှာတော့ပယ်ရီဟာဘက်မလိုက်တဲ့သုတေသီတစ်ယောက်မဟုတ်တော့ဘူး။ YBOP ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူရန်သူသည်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Prause, Ley နှင့် Perry တို့၏ထင်ရှားသော“ Porn On Your Brain On Porn” ကျွမ်းကျင်သူများစာမျက်နှာတွင်ထင်ရှားသည်။ https://www.realyourbrainonporn.com/experts။ အသေးစိတျအဘို့ဤစာမကျြနှာကိုကြည့်ပါ: Porn စွဲ Deniers (www.realyourbrainonporn.com) ကလဲဆင်နွှဲခဲ့ပါသေးတယ်ရန်လိုအမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှု.
ပယ်ရီ၏လေ့လာမှုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအကြိမ်ရေနှင့် ပတ်သက်၍ တိကျသောအချက်အလက်မရှိပါ
ခေတ်မီစာရင်းအင်းပြီးနောက် "မော်ဒယ်," ပယ်ရီတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြောင့်အဆိုပြုထား, ဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုကိုအတွက်အမှန်တကယ်တရားခံဖြစ်ပါတယ်။ သူကသာမေးမွနျးအဖြစ် Perry ရဲ့သစ်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက် gaping အပေါက် ", တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကြိမ်နှုန်းအပေါ်တိကျသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသောအချက်အလက်များ၏မရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်သငျသညျနောက်ဆုံးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခဲ့တယျတဲ့အခါမှာ? "ကြိမ်နှုန်းအပေါ်အစိုင်အခဲဒေတာမရှိရင်, သူ့ပြောဆိုချက်ကိုတစ်ဦးမသိဘဲရမ်းမေးတဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုသည်။ Perry ရဲ့လေ့လာမှုမှ:
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေလေ့အကျင့်။ အဆိုပါ NFSS နှင့် RIA နှစ်ဦးစလုံးရေးသားသူနှစ်ဦးစလုံးစစ်တမ်းများအဘို့တစ်ခုတည်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတိုင်းအတာသို့ပေါင်းစပ်ကြောင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေနှင့် ပတ်သက်. တူညီသောမေးခွန်းနှစ်ခုမေးကြည့်ပါ။ သူတို့သည်အစဉ် (ဟုတ်ကဲ့သို့မဟုတ်အဘယ်သူမျှမ) masturbated လျှင်သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးမေးမွနျးခဲ့သညျ။ သူတို့သည်အစဉ် masturbated ခဲ့ကြောင်းဖြေကြားသူများသည် "ဟုမေးပြီးတော့ခဲ့ကြသည်ဘယ်အခါမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခဲ့တာလဲ"တုန့်ပြန်ချက် 1 = ယနေ့ကနေ9= လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ကျော်ကမရသေးသည်လည်းရှိသည်။
နောက်တာပါ သို့သော်လည်းပယ်ရီ၊ Prause, Ley, Grubbs နှင့်အခြားသူများသည်ယခုဤအထီးကျန်စာတမ်းနှင့်ဤအလွန်မြင့်မားသောမရေရာဒွိဟအချက်အလက်များအပေါ်မှီခိုသည့်၎င်း၏တာဝန်မဲ့ "ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု" အပေါ်အခြေခံပြီးထူးခြားသောတောင်းဆိုမှုများလုပ်နေကြသည်။ ညစ်ညမ်းသောဝါဒဖြန့်ချိရေးစက်သည်ပယ်ရီ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်အပြည့်ရှိသည်။
တကယ်တော့, သာ. ကြီးမြတ် porn အသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် နည်းသော ဆက်ဆံရေးဟာပျော်ရွှင်မှုကို နှစ်ဦးစလုံးပယ်ရီနမူနာအတွက် (က & ခ):
နောက်ဆုံးထွက် - Leonhardt et al။ , 2019, Samuel Perry ရဲ့စက္ကူအမှာစကားပြောကြား
BACKSTORY: 2018 အဆိုပါခုနှစ်တွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ Leonhardt et al ။ , 2018 နှင့်မှတ်ချက်အဘို့ဟုမေး၏။ sexology ဂျာနယ်များအတွက်ဖြစ်ပေါ်သည့်အမြစ်တွယ်နေပြီးဘက်လိုက်မှုထုတ်ဖော်ခြင်း,4မှတ်ချက်အ6အားဖြင့်ခဲ့ကြသည် RealYBOP "ကျွမ်းကျင်သူများက" Samuel Perry၊ Taylor Kohut၊ Nicole Prause နှင့် David Ley (Ley နှင့် Prause တို့သည်ပညာရှင်များမဟုတ်ပါ) ရှင်းပြသည့်အတိုင်း၊ RealYBOP သည် YBOP ၏ဝေဖန်မှုများကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးစားနေသည် YBOP ရဲ့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုခိုးယူသည်။
RealYBOP နှင့်၎င်း၏ကျွမ်းကျင်သူများ ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏အစီအစဉ်ကိုမြှင့်တင်ရန်တက်ကြွစွာပါဝင်နေကြသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုဖော်ထုတ်ရန်နှင့်လူထုကိုရှုပ်ထွေးစေရန်ကြိုးပမ်းမှုအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းမှုမဟုတ်ဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်တကယ့်ပြproblemနာဖြစ်သည်ဟုမှတ်ထင်ခဲ့ကြသည်။ ညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ၏ဝေဖန်ချက် ၄ ချက်သည်ဤအခိုင်အမာကို (ပယ်ရီ၏စာတမ်းတစ်ခုတည်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏အခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်သောယူဆချက်အပေါ် အခြေခံ၍) ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်, Leonhardt et al ။ အားလုံးနှင့်အတူ6မှတ်ချက်တုံ့ပြန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်လိင်အရည်အသွေး: ရည်မှန်းချက်, ကွဲပြားနှင့်ရှင်းလင်းမှတ်ချက်ပေးခြင်းမှ reflex-တုံ့ပြန်မှု (2019).ဒီနေရာမှာစာရေးသူစာရေးသူများအနေဖြင့်“ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းမှု” လို့ခေါ်သည့်ကောက်နုတ်ချက်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီးအလေးအနက်ထားပြီးတိကျမှန်ကန်သောဝေဖန်မှုကိုဖော်ပြထားသည်။
လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာအသုံးပြုမှုနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်ရာဂစိတ်ဖြေခြင်းလမ်းဆုံကိုကိုင်တွယ်သည့်အခါပယ်ရီ၏ပုံစံကိုထည့်သွင်းရန် (Ley, 2019; Perry, 2019b; Prause, 2019)၊ အနာဂတ်သုတေသနတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်၊ အကြောင်းအရာအပေါ်ဝေဖန်ချက်များကိုအနီးကပ်ဖတ်ရန်သုတေသီများအားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်ဆိုင်ရာမီဒီယာနှင့်ရလဒ်တစ်ခုအကြားမည်သည့်ဆက်နွယ်မှုကိုမဆိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်သာသက်ဆိုင်သည်ဟုစဉ်းစားခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သတိပြုမိသည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးစေသောလေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုသည်မိမိကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်နှစ်ရှည်လများပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလိင်မှုကဏ္ increases တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပုံကိုစဉ်းစားနေသည်။ လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာတွင်ဖော်ပြထားသော scripting message ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲလက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကိုဘဝ၏ဗဟိုအချက်အခြာကျမဟုတ်သော (Leonhardt & Willoughby, 2019) အဖြစ်ရှုမြင်ခြင်း။ နောက်ခြေလှမ်းနောက်လှည့်ပြန်လှည့်ကြည့်လျှင်ကြီးမားသောသုတေသနပြုချက်တစ်ခုကမီဒီယာသည်ကျူးကျော်မှုနယ်ပယ်ရှိသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုနှင့်မီဒီယာကို scripting လွှမ်းမိုးမှု (Anderson et al ။ , 2012) နှင့် prosocial အပြုအမူ (Coyne et al ။ , 2017) ကအကြံပြုသည်။ ဥပမာ - prosocial မီဒီယာမှ prosocial သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများသို့ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသော scripting သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုရှင်းပြသည့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုကြိုးစားရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ ပင်စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာပါလိမ့်မည်။
လိင်မှုကိစ္စမီဒီယာမှဖြစ်နိုင်ချေရှိသော scripting လွှမ်းမိုးမှုသည်ကြိုကြားကြိုကြားအသုံးပြုသူများအတွက်သိမ်မွေ့လွန်းသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ longitudinal အသင်းအဖွဲ့များသည်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုမရှိခြင်း (ဥပမာ Perry & Longest, 2019) ရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်း၊ အချို့သောသုံးသပ်သူများသည်အင်အားကြီးမားသောကြောင့်အင်ပါယာဆိုင်ရာအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည် (Leonhardt et al ။ , 2018) ။ သို့သော်ဤရှေ့နောက်မညီမှုအချို့သည်သဘောထားနှင့်အပြုအမူများကိုပုံသွင်းရာတွင်ပိုမိုကြီးမားသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိရန်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်သို့မည်ပုံကိုအသေအချာထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။ လိင်မီဒီယာအသုံးပြုမှုကိုလေ့လာသည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်စာရင်းကိုင်ရန်အရေးကြီးပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်မကြာသေးမီကတွေ့ရှိချက်များ၏အရေးကြီးသောပံ့ပိုးမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝမ်းမြောက်စွာအသိအမှတ်ပြုသည် (Miller et al ။ , 2019; Perry, 2019a) ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၏ရှုပ်ထွေးသောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုလွန်ကဲစွာဖော်ပြသင့်ပြီးထိုအချက်များမည်သို့ဆက်စပ်နေသည်ကိုစူးစမ်းရန်ပိုမိုခေတ်မီသောပင်ကိုယ်မူလစမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်သတိပြုသင့်သည်။
J ကိုလိင် Res ။ 2019 ဇန်နဝါရီ 11: 1-13 ။ Doi: 10.1080 / 00224499.2018.1556772
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အချစ်ဇာတ်လမ်းများအကြားအဆက်မပြတ်အဆိုးမြင်ဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာမှုများစွာကတွေ့ရှိရသည်။ ဒီဆက်စပ်မှုကိုရှင်းပြဖို့သီအိုရီအမျိုးမျိုးကိုအကြံပြုထားပေမဲ့၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနဲ့ဆက်ဆံရေးရလဒ်တွေအကြားလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဟာတစ်ကိုယ်တော်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနဲ့ဆက်စပ်မှုရှိမရှိလေ့လာမှုကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်မှုမရှိသေးပါဘူး။ လက်ရှိလေ့လာမှုသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေသည့်အလေ့အကျင့်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် relational ပျော်ရွှင်မှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလျော့နည်းစေ၊ လိင်ကြိမ်နှုန်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှု၊ စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများနှင့်အခြားသက်ဆိုင်သောဆက်စပ်မှုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများပါဝင်သည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မိသားစုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာလေ့လာမှုအသစ် (NFSS; N = 2012) နှင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အမေရိကရှိဆက်ဆံရေးတွင်စစ်တမ်း (RIA; Ng = 1,977) မှရလဒ်များအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများအကြား relational ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အဆိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းပြသသည် တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကသို့မဟုတ်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုမရှိခြင်း အမှန်မှာ၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကျား၊ မကွဲပြားမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်သည်ဆိုပါကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် relational ပျော်ရွှင်မှုကိုအကြားအပြုသဘောဆောင်သောဆက်စပ်မှုကသက်သေအထောက်အထားများကထောက်ပြသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနာဂတ်လေ့လာမှုများတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုဆက်စပ်မှုသီအိုရီများနှင့်ဆက်စပ်မှုရလဒ်များကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။